Ukuphupha ngeBayrisch Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuba uphawu "lwaseBavaria" lubonakala kuthi ephupheni, oku kunokwenzeka kwimixholo eyahlukeneyo yamaphupha. Ke kuyenzeka, umzekelo, ukuba sizifumane sikwimeko yamaphupha kumnyhadala wabantu abadumileyo kwihlabathi kunye nelona likhulu emhlabeni eBavaria, eOktoberfest. Mhlawumbi siza kunxiba iimpahla zesiko laseBavaria, i-yodel okanye siye kwilizwe laseJamani kwaye samkele izithethe zaseBavaria. Imibala eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe, echongwa yiBavaria, inokubonakala njengophawu lwesimboli kumaphupha ethu.
Onke la maphupha, apho into ethile idlalwa yiBavaria, inokubonakaliswa okukhethekileyo. Kodwa ngaba ukutolikwa kwamaphupha kuyitolika njani le nto? Ithini ngokuthe ngqo ngathi nangobomi bethu?
1 Uphawu lwephupha «iBavaria» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umqondiso wephupha «iBavaria» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha «iBavaria» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iBavaria» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu "lwaseBavaria" lumele iphupha layo yonke into nge Isithethe kunye nenkcubeko kufuneka yenze. Ke ukuba iphupha limalunga nento yaseBavaria, oku kubonisa ukuba lo mntu kuthethwa ngaye ujongana neengcambu kunye neenqobo zabo zokuqala. Mhlawumbi uvuselela inkcubeko ethile ngaphambili ebomini bakho okanye uyaluqonda unxibelelwano lwangaphakathi kwilizwe lakho. Nokuba isuka eBavaria okanye ayibalulekanga kangako.
Ukongeza kule ntsingiselo isisiseko yamaphupha apho kukho into yaseBavaria, ezinye iimeko zephupha zikwatolikwa ngakumbi. Ke imibala yaseBavaria eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe nayo inokuyibuyisela ebomini. iinkolelo zonqulo uphawu. Ukuba umntu ekuthethwa ngaye akazange akholelwe ebomini bakhe, usaxakekile ngemibuzo enxulumene namandla aphezulu. Ngale nto, kungekudala uza kukwazi ukufumana uxolo lwangaphakathi.
Ukuba undwendwela iBavarian Oktoberfest eMunich ephupheni lakho, oku kuyalumkisa ngokuchasene nayo Ukuziphatha kakubi. Iqela elinomdla liyakonwabela amaxesha ngamaxesha, kodwa akufuneki lilahle umbono wento ebaluleke ngokwenene.
Ukufudukela kwisixeko saseBavaria kunye nokwamkelwa kokuziphatha kweBavaria okanye ulwimi lwaseBavaria lubhengeza okukufutshane, ngokoluvo ngokubanzi. utshintsho phakathi. Ukuphupha kufuna ukubaleka isantya sokungakhathali kubomi bemihla ngemihla. Ukwenza oku, sele edlala ngombono wokuhlengahlengisa ubomi bakhe, ejolise kwiinjongo kunye neenqobo ezintsha.
Olu toliko luyasebenza nakwimeko apho umntu ochaphazelekayo enxibe iimpahla zesiko zaseBavaria. Ke kukho inkalo eyongezelelweyo ongathanda ukuyidibanisa neqela elitsha loluntu. Inokuphelisa ngokusisigxina ubuhlobo obudala kungekudala.
Umqondiso wephupha «iBavaria» - ukutolikwa kwengqondo
Kwingcaciso yeli phupha, "iBavaria" ifanekisela umnqweno womntu ochaphazelekayo. Uxolo y Ukuphumla. Kusenokwenzeka ukuba okwangoku uzive ukhululekile kubomi bemihla ngemihla. Umcimbi othile usongela ukukhula ngaphezulu kwentloko yakho. Ngaphezulu kwako konke, oku kuphazamisa ukulingana kwengqondo yakho. Uphawu "lwaseBavaria" kufuneka lukhuthaze ngokungxamisekileyo ukuba uqale kwinqanaba elitsha lobomi.
Umqondiso wephupha «iBavaria» - ukutolika kokomoya
Ephupheni ngokomoya, uphawu "waseBavaria" lunokuthetha fumana umele umntu ochaphazelekayo ngokunxulumene nokunxibelelana okunzulu kwimeko yabo yokomoya. Ukwenza oku, kufuneka uqale uvule ingqondo yakho.